YEYINTNGE(CANADA): Sunday, January 10
10 Jan 2010 ဒိုင်ယာရီ
BY ရဲရင့်ငယ်(ကနေဒါ) ... 1/10/20100အကြံပြုခြင်း
ဇန်နဝါရီ ၁၀ ၊၂၀၁၀။
နှစ်များစွာ မြိုသိပ်ထားခဲ့ရတဲ့၊ ခါးသီးခံစားခဲ့ရတာတွေကို၊ ဖော်ထုတ်ရတဲ့အတွက် ဝမ်းသာဝမ်းနည်းခြင်း ၂ ခုကြောင့် မျက်ရည်များလည်နေပါတယ်၊
အထူးမေတ္တာရပ်ခံလိုသည်မှာ- ကျွန်တော်သည် အောင်လင်းထွဋ်လိုထောက်လှမ်းရေးမှ နာမည်ကြီး သံမှူးကြီး မဟုတ် ပါ၊ သာမန်နိုင်ငံခြားရေးဝန်ထမ်း တစ်ခု၏ ကြုံတွေ့နေရသော အဖြစ်အပျက်များကို နာကျည်းစွာ ပြန်လည်ပြောပြခြင်း သာဖြစ်သည်၊ သို့သော်လည်း၊ တခြားသောသူများ၏ အမည်နာမများလည်း ပါဝင်နေပြီး၊ ထိုသူများလည်း မြန်မာပြည် ထဲတွင် ပင်ရှိနေသေးရာ၊ သူတို၏ဘဝနှင့်လုံးခြုံရေးကို စာနာမှုရှိရန်လည်း လိုအပ်ပါသည်၊ တနည်းဆိုလျှင်၊ သတင်းရင်း မြစ်ကို ကာကွယ်မှုရှိရန် လိုအပ်ပါသည်၊
(တနေ့ မြန်မာပြည်သည် ကမ္ဘာ့ဒီမိုကရေစီနိုင်ငံတစ်ခု မုချဖြစ်ရမည်) သံနိဌာန်ဖြင့်
ပါဝင်ခဲ့သည့် ဖွဲ့စည်းများ-- ဗိုလ်တထောင်(၂) ကျောင်းသားသမဂ္ဂ ၁၉၈၈ လူထုတော်လှန်ရေးကာလ အမျိုးသား ဒီမို ကရေစီ အဖွဲ့ချုပ်၊ ဗိုလ်တထောင်(ထိုစဉ်က၊ ၅၃ လမ်းနှင့် ကုန်သည်လမ်ထောင့်) (ထိုစဉ်က၊ ၄၇ လမ်း ၄၆ လမ်ကြား ဗိုလ်ချုပ်လမ်း)
ပါဝင်လှုပ်ရှားမှုများ -- ၁၉၈၈ ဇူလိုင် ၂၃၊ ဦးနေဝင်းမှ နှုတ်ထွက်ကြောင်း ကြေညာပြီး၊ ကျောင်းမှကျောင်းသားများ၊ ဗိုလ်တထောင် ကောလိပ်ကျောင်းသားများပါဝင်သေား ဆန္ဒပြပွဲများတွင် တောက်လျှောက်ပါဝင်သည်၊ သိပ်ပျော်စရာ ကောင်းသည်၊ ဒီမိုကရေစီ ရတော့မည်ဟု ယုံကြည်သည်၊ မှတ်မိသူများထဲတွင် ကိုစိန်အုံး(ဒေါ်စု ဓါတ်ပုံရိုက်ကာ ဖြန့်ဝေ ခြင်းကြောင့် ၁၉၉၆ တွင် မန်းလေးထောင် ကျခဲ့ရ)၊ ရဲကျော်စွာ၊ ယခုစစ်ဆေးမှ ဗိုလ်မှူးမျိုးမင်းထွေးသက်ထူး (မအူပင် စက်မှုကျောင်းအုပ်) ။
၈၈၈၈ ညတွင် မြို့တော်ခန်းမသို့ သွားရောက်ပါဝင်ပြီး၊ စတင်ပစ်ခတ်စဉ် ထွက်ပြေးလွတ်မြောက်သည်၊ သြဂုတ်လကုန် ရွှေတိဂုံ နောက်ဘက် ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၏ လူထုဟောပြောပွဲသို့ ကျောင်းမှကျောင်းသားများနှင့်အတူ တက်ခဲ့ သည်၊ သူမကို ပထမဆုံးအကြိမ်း မြင်တွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊ မေလ ၁၉၉၀ တွင် ကျွန်တော်တို့ မိဘ ဆွေမျိုးများအားလုံး သည် “ခမောက်” ကို မဲပုံထဲ့ခဲ့ကြသည်ကို မမေ့နိုင်ပါ၊ ဗိုလ်ထထောင်မှ ဒေါက်တာမောင် မောင်ကျော် NLD ဟင်္သာတမှ ဒေါက်တာဇော်မြင့်တို့ အမတ်များဖြစ်လာပါသည်။
ထိန်းသိမ်းခံရခြင်း (၁) စက်တင်ဘာ ၁၉၉၀
(တစ်လခန့် ဗိုလ်တထောင် ရေတပ်ထောက်လှန်းရေး(၁)
(ဖြစ်စဉ်အကျဉ်း -- စစ်တပ် အာဏာသိမ်းမှု ၂ နှစ်မြောက် ဆန့်ကျင်စာရွက်များကို ဝန်ကြီးများရုံးနှင့် ဗိုလ်တထောင် (၆) သိန်ဖြူလမ်းတွင် ကျောင်းသားများ ဖြန့်ဝေခြင်း၊ စုဝေးကြွေးကြော်ခြင်း)
(စစ်မေးပုံ -- ညပိုင်း ညလယ်ခန့် ခေါ်စစ်၏ ဆိုင်ကယ်စီးရခြင်း၊ ပါးရိုက်ခံရခြင်း၊ နာရင်းအုတ်ခံရခြင်း ရေကို တစ်နေ့ တစ်ခွက်သာပေးခြင်း၊ နေပူလှန်းခံရခြင်း)
ထိုနောက် -- ခံဝန်ချက်ဖြင့် ပြန်လွတ်ပါသည်၊
ထိုကဲ့သို့ စိတ်ပင်ပန်း လူခံစားရခြင်းကြောင့်၊ ဆေးကုသမှု ခံယူရပြီး၊ ၁၉၉၁ ဆယ်တန်းစာမေးပွဲ ကျခဲ့ရသည်။ ၁၉၉၂ တွင် အောင်ပါသည်၊
(၂) ၁၉၉၆ အောက်တိုဘာတွင် ရန်ကုန်စက်မှုတက္ကသိုလ် ကျောင်းသား ၃ ယောက် အဝေးပြေးကားဂိတ်ဆယ်မိုင်တွင် စည်ပင်ရဲက ဖမ်းဆီးရိုက်နှက်ရာမှ စတင်ကာ ဆန္ဒပြမှု စတင်ဖြစ်ပေါ်သည်၊
ကျွန်တော်သည် ရန်ကုန် တက္ကသိုလ် (စိတ်ပညာ) မှကျောင်းသားများ၊ ပဲခူးဆောင်ရှိ၊ ဟင်္သာတာနယ်မှ သူငယ်ချင်းများ နှင့်အတူ ပါဝင်သည်၊ မှတ်မှတ်ရရ၊ ဒီဇင်ဘာလဆန်းပိုင်း၊ နံက် ၂ နာရီလောက်တွင် လှည်းတန်း လမ်းဆုံးတွင် သူငယ် ချင်းများနှင့် ဆက်နေခဲ့သည်၊ စစ်ထရပ်ကားတစ်စီးမှ၊ လောစပီကာဖြင့် “ချင်းသံဝဲဝဲ” နှင့် လူစုခွဲရန် ကျောင်းသားထုအ တွင်း၊ မြေအောက်အဖျက်သမားဝင်ရောက်နေပြီး ဖြစ်ကြောင်း၊ လုစုမခွဲလျှင် အင်အားသုံးမည်၊ အချိန် ၁၀ မိနစ်နောက် ဆုံးပေးမည် ဟုဆိုကာ လုံထိန်းရဲများက ရှေ့ဆုံးလိုင်းမှ စစ်ကြောင်းပုံဖြင့် မီးသတ်ကားများနှင့်အတူ အင်းစိန်လမ်းမနှင့် ပြည်လမ်းမဘက်ဆီမှ လှည်းတန်းလမ်းဆုံသို့ နေရာယူလာသည်၊ ၄င်းတို့နောက်တွင် လည်ပတ်နီဆီးထားသော စစ်သား များ၊ နောက်တွင် အချုပ်ကားများ နောက်ဘက်တွင် စစ်နှင့်ရဲထရပ်ကားများ၊ လမ်းပေါ်တွင် လမ်းမီးများရှိနေဆဲ၊ ထို နောက် လုံထိန်းများက လမ်းဆုံးကို အင်အားသုံး ဖမ်းဆီးသည်၊ ဗမာပြည်တွင် မီးလောင်လျှင် ရေမပါခဲ့သော မီးသတ် ကားများသည် ဤကိစ္စတွင် ရေအပြည့်နှင့် ရေပိုက်ကြီးများနှင့် ထိုးခွဲလာပါသည်၊ ကျောင်းသားတစ်ဦးမှငါတို့ကို ခွေးတွေ ရိုက်နေပြီးဟူ အော်သံ၊ ကျွန်တော့်နားမှာ ကြားယောင်နေသည်၊
ကျွန်တော်သည် ရာမည ဆောင်ရှေ့ဘက်မှ သူငယ်ချင်းများနှင့်တူ ရရာအုတ်ခဲများဖြင့် ရဲများဆီသို့ ပစ်သွင်း တိုက်ခိုက် သည်၊ မကြာခင် ကျွန်တော်သို့နောက်သို့ စစ်ထရပ်ကားတစ်စီး ကျောင်းအတွင်းသို့ရောက်ရှိပြီး ပိတ်ဆို့ဖမ်းဆီးခြင်း ခံ လိုက်ရပါသည်၊ နံပါတ်တုတ်ဖြင့် ရိုက်၍ စစ်ထရပ်ကားပေါ်တွင် ပုံစံထိုင်ရင်း၊ ကျိုက်ဝိုင်းအောင်သပြေ စစ်ကြောင်းစခန်း သို့ ပါသွားခဲ့သည်၊ ထိုစခန်းတွင် ကျောင်းသားတစ်ရာကျော်မျှ ထိန်းသိမ်းစစ်ဆေး နှိပ်စက်ခံရသည်။ ဘယ်သူကဦး ဆောင်တာလဲ ဆိုသည်မှာ စစ်တိုင်းမေးခံရသည်၊ ထို့နောက်တွင် ထိုစဉ်က လှမ်းဒုညွှန်မှူး ဗမခ ကျောင်းဝင်းမှ ခံဝန် ချက်ဖြင့် ကျောင်းသားများကို ပြန်လွှတ်ပေးခဲ့သည်၊ သို့သော် ထင်ရှားသည့်ခေါင်းဆောင်ပိုင်း ကျောင်းသားများ ထောင် ဒဏ်ကျခံရသည်၊ ထိုအထဲတွင် ကျွန်တော်၏ ဗိုလ်တထောင် ၂ မှ ကျောင်းနေဘက် ငယ်သူငယ်ချင်း ရဲကျော်စွာ(Y.I.T) ကို ၁၉ နှစ်ချမှတ်ခံရပြီး သာယာဝတီ ထောင်သို့ ပို့ခံရကြောင်း နောက်ပိုင်းတွင် သူ့အမေထံမှ သိခဲ့ရသည်၊ ထို့နောက် တွင် တက္ကသိုလ်တွေ ၁၉၉၈ နှစ်လယ်ပိုင်းထိ ပိတ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်တော်လည်း ဟင်္သာတ နယ်ဘက် ရွာတစ်ရွာသို့ သွား ရောက် တိမ်းရှောင်နေခဲ့သည်၊ အဝေးသင်နောက်ဆုံးနှစ် စာမေးပွဲသို့ ၁၉၉၇ တွင် ဖြေဆိုအောင်ခဲ့သည်၊
၁၉၉၇ နှစ်ကုန်တွင် သတင်းစာထဲမှ နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ ဌာနစုမှူး၂/ တတိယ အတွင်းဝန် (၂၀) နေရာခေါ် ကြောင်း တွေ့ရှိကာ အရဲစွန့်ကာ ဝင်ဖြေကာအောင်သဖြင့် ၁-၁-၁၉၉၈ တွင် ပြည်လမ်းရှိ ထိုရုံးသို့ စတင်ဝင်ရောက်ခဲ့ပါ သည်၊ ပါသူထဲတွင် ကိုရဲမင်းထွန်း (နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး)၊ ကိုအောင်ဂျော်သူ (နိုင်ငံတကာ ဆက်ဆံရေး) ယခု တလ်အဗီး၊ မြန်မာသံရုံး၊ ဦးသန်းရွှေသမီး ကြည်ကြည်ရွှေ (ယခုသံမှူး၊ စင်္ကာပူ) နှင့် အခြားသူများ၊ ရုံးတွင်အောင်သူများ ပါရှိသည်။
ထိုစဉ်က ဦးအုန်းဂျော်(ဝန်ကြီး)၊ ဦညွန့်ဆွေ(ဘန်ကောက် မြန်မာ စစ်သံမှူး) ဒုဝန်ကြီးတို့ဖြစ်ကြသည်၊ အထူအရာရှိ ဗိုလ်မှူးမင်းသိန်း (ကက လှမ်း) မှရှိသည်၊
ကျွန်တော်တို့ကို တစ်လခန့်အကြာ ဌာနများခွဲဝေ တာဝန်ပေးရာ၊ ကောင်စစ်ရေးရာဌာနသို့ ကျခဲ့သည်၊ ထိုဌာနသို့ကျ သည့်အတွက် ကျွန်တော်နေ့တိုင်းဘုရားစာ ရွက်ခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာ၊ လုပ်ငန်းသဘာဝအားဖြင့် နိုင်ငံရေးကိစ္စများ ဖြစ်ပြီး၊ ကက လှမ်းနှင့် အဓိက ပတ်သက်သည်၊
-ပြည်ပရှိ မြန်မာသံရုံးများ၊ စစ်သံရုံးများက ပြည်ပရှိ မြန်မာ့ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားမှုသတင်းများက ကောင်စစ်ဌာနနှင့် ကက လှမ်းသို့ ပေးပို့သည်။
* ၁၉၈၈ မှစပြီး စစ်အစိုးရအား ပြည်တွင်းပြည်ပမှ ဆန့်ကျင်သူများစာရင်းကို ထားရှိပြီး၊ အမြဲတမ်း Update လုပ်ရသည်၊
- ဗွီဇာ ကိစ္စ
* မြန်မာသံရုံးများမှထုတ်ပေးရန် မဆုံးဖြတ်နိုင်သူများကို ကောင်စစ်၊ နခဌ သို့ပေးပို့သည်၊ ထိုသူများသို့ဆက်ပို့ပြီး ခွင့်ပြု ချက်တောင်းချသည်၊
* ထူးထူးခြားခြားမှ မှတ်မိတာက ရူရှ မှ စစ်လက်နက် ထုတ်လုပ်သူများ ရာချီ ထုတ်ပေးခဲ့ရသည်၊
* Visa Online System
. ၂၀၀၁ တွင် တိုးရစ်ဗီဇာများကို အင်တာနက်သုံး ထုတ်ပေးရန် Project တစ်ခု စပါသည်၊ ထိုကိစ္စတွင် ဌာနညွှန်မှူး (ဗိုလ်မှူး ခင်မောင်အေး)မှ ကျွန်တော်တစ်ယောက်ကို တာဝန်ပုံကာ ကောင်ထည်ဖော်ခိုင်းသည်၊ (သူသည်၊ စစ်တွေ ထလရ တပ်(၁၀) နှင့် မန္တလေး ထလရ တပ်(၁) မှ တပ်မှူးဖြစ်ခဲ့ပြီး၊ ၁၉၈၈၊၈၉ ကာလများတွင် ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှား သူများကို အင်းစိန်ထောင်အတွင်း နှိပ်စက် စစ်ဆေးခဲ့ပြီး၊ တချို့ကိုတုတ်ဖြင့် ကိုယ်တိုင်ရိုက်သတ်ခဲ့ကြောင်း သူကိုယ် တိုင် မြိန်ရေ ရှက်ရေ ပြန်ပြောပြလို့ သိခဲ့ရသည်၊
. သူကိုယ်တိုင် သတ်လိုသူများမှာ သံမဏိ ဗိုလ်ခင်မောင်၊ မိုးသီးဇွန်၊ ဒေါက်တာစိန်ဝင်း တိုဖြစ်ကြောင်း၊ Black List ကိစ္စများ လုပ်ရင်း၊ သူက အခဲမကြေ ပြောပြခဲ့သည်၊
. သူသည် ထိုင်းနိုင်ငံသို့ ကုန်သည်များမှ ခိုးထုတ်ရန် ကြိုးစားခဲ့သော ပတ္တမြားတုံးကြီးကို သူ၏စွန့်စား ထောက်လှမ်းမှု များဖြင့် ပြန်လည်ရရှိခဲ့ပုံကို ပြောပြသည်၊ အဓိကမှာ ၄င်း မွေးယူထားသော သတင်းပေးများတော်ကြောင်း၊ ထိုမှအခြေခံ ကာ လိုက်နိုင်ခဲ့ခြင်း ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာ့ ရုပ်သံမှ ထုတ်လွှင့်ခဲ့သော “အဝါရောင် ပစ်မှတ်ငယ်များ” ဇာတ်လမ်းသည် ဤဖြစ်ရပ်ကို အခြေခံထားကြောင်း ပြောပြခဲ့သည်၊
. (ထို့နောက် မန္တလေးတိုင်းမှူး ဗိုလ်ချုပ်ထွန်းကြည်သမီး လာဘ်စားမှုများကို ဖော်ထုတ်ရာမှ သူအဘေခံ လိုက်ရာမှ နိုင်ငံခြားရေးရုံးသို့ ၁၉၉၄ တွင် ခင်ညွန်မှ သူ့ကိုကယ်တင် ပြောင်းရွေ့ခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်၊)
. (ထလရ တပ်မှူးများသည် ခြေလျင်တပ်မှ တိုင်းမှူး၊ တပ်မမှူးများကိုပင်၊ “လာဘ်စားသည်” ဆိုကာ ဖြုတ်ချရန်သော် လည်းကောင်း၊ အာဏာပြိုင်ခြင်းများကို နေရာတိုင်းတိုင်း လိုလိုတွင် ပြုလုပ်ခဲ့သည်၊ ယခုအမေရိကန်ရောက်အောင်ထွဋ် အပါအဝင်)
. ထိုနောက် ၁၉၉၆ - ၁၉၉၉ ကာလများတွင် ဝါရှင်တန် မြန်မာသံရုံး၊ သံမှူးဖြစ်ကာ အမေရိကန် နိုင်ငံရှိ ဒီမိုကရေစီရေး လှုပ်ရှားသူ ၂၀၀ ခန့်၏ သတင်းများကို သတင်းပေးများမွေးကာ ကက (လှမ်း)သို့ လုပ်ပြခဲ့ပြန်သည်၊
. အနှီဤကဲ့သို့ အရပ်ဖက်သို့ ညွှန်မှူးဖြင့် ရောက်နေသည့်တိုင် ရဲရဲတောက်နေခြင်းကြောင့်၊ ၂၀၀၂ တွင် အီတလီနိုင်ငံ ဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမာတ်အဖြစ်သို့ လုပ်ဖေါ်ကိုင်ဖက်များကို ကျော်လွှာကာ မင်းသားကြီးမှ ခန့်အပ်ခဲ့ပါသည်၊ ၂၀၀၅ တွင် ထလရ များကို ကျူပင် ခုတ်သော်အခါ ပြန်လည်ခေါ်ယူခံရကာ၊ ဒဂုံ(မ)တွင် နေထိုင်လျှက်ရှိပါသည်၊
. ကျွန်တော်မှ ဤကိစ္စတွင် ကွန်ပျူတာ နည်းပညာနှင့် ငွေအား၊ ထို့အပြင်၊ blacklist စနစ် ထားရှိခြင်းကြောင့် များစွာ ခက်ခဲကြောင်း၊ အရှိတိုင်းရင်ပြခဲ့ရာ မိန့်မနာခံလိုမှုနှင့် ဝန်ကြီးထိတက်ခဲ့ရပြီး ကင်ဘာရာ မြန်မာသံရုံးသို့ စေလွှတ်တတ် ရန် လျာထားပြီးမှ ဝန်ကြီးဝင်းအောင်မှ “နိုင်ငံရေးအရ စိတ်ချရသူတစ်ဦးနှင့် အစားထိုးရန်” ဟု မှတ်ချက်ပေးကာ ပယ် ဖျက်ခဲ့သည်၊ တကယ်တော့ ဤကိစ္စတွင် ကြီးမားသော အကြံအဖန်(ခွင်) တစ်ခု ရှိနေသည်ကို နောင်ပိုင်းမှ သိရသည်၊ ၄င်းကိစ္စသတွက် အစည်းအဝေးများကို လှိုင်မြို့နယ်ရှိ ထီးကိုးလက် (Bagan Cybertech) တွင် သတင်းစာထဲမှ သား အဖြစ်မှ စွန့်လွှတ်ကြောင်း၊ မင်းသားကြီးနှင့် ဆရာဝန်မကြီးတို့မှ ကြေငြာခဲ့သည်) ဦးဝင်းအောင်၏ သားသောင်းစုငြိမ်း၊ ထိုကဲ့သို့ အဆင့်မြင့် လျှို့ဝှက်စည်းဝေးသို့၊ ကက လှမ်းမှ ဗမက တင်ဦ၊ ကျော်သိန်း၊ ရဲသတင်းတပ်ဖွဲ့မှူး သက်ထွတ်၊ လဝက ဒုညွှန်ချုပ် ဇော်ထွန်း၊ ကောင်စစ်ညွှန် ချုပ်သိန်းမြင့် တို့ပါသည်၊ အားလုံးက လေးလေးစားစား နားထောင်ခဲ့ရ သည်မှာ ရဲနိုင်ဝင်း၊ ၄င်းကိစ္စအတွက် US dollar 10 million ရင်းနှီးမြှပ်နှံထားသည်ဆိုသော ဆိုက်ဘာတက် ပိုင်ရှင်ရဲနိုင် ဝင်းအား၊ ကွန်ပျုတာ ပိုင်းဆိုင်ရာ အတတ်ပညာနှင့် ထိပ်တန်းလျှိုဝှက်လုံခြုံရေးအရ လုပ်ငန်း ကန်ထရိုက်ပေးအပ် ကြောင်းနှင့် Software အတွက် သောင်းစုငြိမ်းက ဆောင်ရွက်မည်ဖြစ်ကြောင်း၊ အစည်းအဝေးမှ ဆုံးဖြတ်ခဲ့သောခါ ဒါကြောင့်ဆိုတာ ကျောချမှ ဒါမြဗိုလ် အလှူရှင် ကျောင်းဒါကာကြီးတို့မှန်း သိခဲ့ရသည်၊
. ၄င်းစနစ်သည် နိုင်ငံခြားရေး၊ လဝက၊ SB/MI (၄) ဌာနတို့ကို ကွန်ပျူတာကွန်ယက်စနစ်ဖြင့် ချိတ်ဆက်ထားခြင်းဖြစ် သည်၊ ထိုစဉ်က Password နှင့် Code တို့မှာ ပြောင်းလဲခဲ့ပြီးဖြစ်သည်၊
မကြာခဏ ဆိုသလို ပင်လယ်ပြင်ရှိ ရေလုပ်သားများမှ မုန်တိုင်းမိ၍ အိန္ဒိယ နိုင်ငံဘက်သို့ မျောပါက အိန္ဒိယ ရေတပ်မှ တွေ့ရှိကာ ထိန်းသိမ်းပြီး ပြန်ပို့ရန် မြန်မာသံရုံးသို့ အကြောင်းကြားလားသည်၊ ဤအခါ ရန်ကုန်ရှိ ကယ်ဆယ်ရေးဝန်ကြီး ဌာန၊ လဝက၊ SB၊ နိုင်ငံခြားရေး)ကောင်စစ်တို့ ထိုစဉ်က ဝန်ကြီးများရုံးဌာနတွင် မည်သို့ပြန်လည်ခေါ်မည်ကို စည်းဝေး လုပ်သည်၊ လဝက ဥပဒေအရ ထိုသူများကို ပြန်ရောက်ပြီးနောက် အရေးယူရန် ရှိသည်ကို အံသြတုန်လှုပ်စွာ နားထောင် ခဲ့ရသည်၊ အကြောင်းမှာ တရားဝင် တစ်ဖက်နိုင်ငံသို့ ရောက်ရှိသွားခြင်းကြောင့် ဖြစ်သည်၊ ပင်လယ်တွင်း မုန်တိုင်းမိသူ များ မသေကောင်း မပျောက်ကောင်း အသက်အန္တရာယ်ကြား မျောပါပြီး၊ တစ်ဖက်နိုင်ငံတွင် ထောင်ထဲမှာ နေရသည်၊ ဒီရောက်တော့ တစ်ခါ၊
ကျွန်တော့်မှာ ထိုသူများမှာ တမင်တကာ ဥပဒေ ချိုးဖောက်သူများ မဟုတ်ကြောင်း မုန်တိုင်းမိသော ပင်လယ်ပြင်တွင် နိုင်ငံတကာရေပိုင်နက်ကိုလည်း သိနိုင်မည်မဟုတ်သည့် လှေတံငါ ဘဝဒုက္ခရောက်သူတို့သာ ဖြစ်ကြောင်း၊ မြန်မာနိုင်ငံ သားဟုတ်လျှင် ပြန်ခေါ်သင့်ကြောင်း အမှတ်တမဲ့ စည်းဝေးတွင် ထပြောမိသည်၊ ရုံးသို့ပြန်ရောက်သောအခါ ဝန်ထမ်း သည် မိမိသဘောနှင့် သဘောထား ပြောခွင့်မရှိကြောင်း အထက်အမိန့်ရသာ ပြောခွင့်ရှိကြောင်း ပြင်းထန်စွာ သတိပေး ခံရသည်၊
ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်၊ ဗခက ခင်ညွန့်၊ ဦးဝင်းအောင် Vs. သန်းရွှေ၊ မောင်အေး ဘာကြောင့်လဲ ?
(၁) ဗခက မင်းသားကြီး ခင်ညွှန့်နှင့် မြန်မာ့အလင်း သတင်းစာများတွင် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးများ ရေးသားသော စည်သူ ငြိမ်းအေး (ခ) စာဆိုစစ်သည် ဗိုလ်မှူးဝင်းအောင်တို့ NLD မှ ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း ရင်ဦးနှင့် ဗိုလ်မှုးကြီးဟောင်း အောင်ရွှေတို့၏ နေရာများကို ဝင်လုခဲ့လို့လား?
(၂) NLD မျိုးချစ်ရဲဘော်ဟောင်းများအဖွဲ့သို့ ဆရာ တပြည့်(၂)ယောက် လျှိုဝှက်လျှောက်လွှာတင်ခဲ့ လို့လား?
(၃) မင်သားကြီးခင်ညွှန့်က သံမဏိ နှင်းဆီကိုမှ မြတ် နိုးလေးစားလာခဲ့လေသလား?
ဦးဝင်အောင်သည် ၁၉၈၂ - ၈၄ ဝန်းကျင်းကာလများတွင် ထိုစဉ် မဆလ ခေတ်က မျက်မှန်ကြီးတင်ဦး၊ ဦးဘိုနီ စသည့် ထောက်လှမ်းရေးများကို ယခုကဲ့သို့ နှိပ်ကွပ်သည့်
သမိုင်းတစ်ချိန်တွင် နိုင်ငံခြားရေးဝန်ကြီးဌာနသို့ ဒုညွှန်မှူးအဖြစ်ရောက်ရှိကာ၊ အဆောက်အအုံ ထောက်ပံ့ရေး ဌာနသို့ စတင်တာဝန်ကျခဲ့သည်၊ တစ်ခုသတိထားမိတာက သူ၏လက်မှတ်နှင့်ယခု ဝန်ကြီးဖြစ်တော့ ထိုးသော လက်မှတ်မတူ ခြင်းဖြစ်သည်၊ သူတွင် AD Calender အရ ၄ နှစ်တကြိမ်သာ မွေးနေ့ရှိပါသည်၊ အကြောင်းမှာ ၂၉ ဖေဖော်ဝါရီ ၄၄ တွင်မွေးနေ့ဖြစ်ခဲ့သောကြောင့်။ ထို့နောက် သူသည် လာအိုနိုင်ငံ သံမှူးကြီး ထိုမှ ဂျာမနီဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်၊ နောက် ဆုံးလန်ဒန်တွင် သံအမတ်ဖြစ်စဉ်၊ ပြင်သစ်နိုင်ငံဆိုင်ရာ မြန်မာသံအမတ်စောထွန်း (လှမ်း၊ ဗိုလ်မှူးဟောင်း၊ လဝက ဝန် ကြီး) ကို ယှဉ်ပြိုင်ကာ ၁၉၉၈ တွင် သူ့ဆရာ မင်းသားကြီးမှ ခန့်ထားခဲ့ခြင်း ဖြစ်သည်၊ ထို့နောက်သူ၏ ဆရာ မင်းသား ကြီး ခင်ညွှန့်ကို နိုင်ငံခြားရေးရာ မူဝါဒကော်မတီ ဥက္ကဌ အဖြစ်တင်ကာ နိုင်ငံခြားရေးဝန်းကြီးဌာနမှာလည်း ကက(လှမ်း) ၏ လက်အောက်ခံ ဌာနခွဲတစ်ခု သဖွယ် လုပ်ဆောင်လာပါသည်၊
ဦးဝင်းအောင်သည် အစိုးရ အဖွဲ့ထဲတွင် ဝန်ကြီးတစ်ဦးဖြစ်လာသော်လည်း၊ တပ်နောက်ဆုံးရာထူးမှာ ဗိုလ်မှူးအဆင့်သာ ဖြစ်ခဲ့ရာ ယခုကဲ့သို့ ဗိုလ်နှင့်ငွေ ဖောင်းပွသော မြန်မာနိုင်ငံတွင် အခြားသော ဝန်ကြီးများက ဗိုလ်ချုပ်များဖြစ်ကြရာ သူက ဗခက ခင်ညွှန့်ကို ဦးသျှင်ပြီး တင်သလို တင်ထားပြီး၊ ကက (လှမ်း)မှ လွှဲ၍ မည်သူ့ကိုမျှ ဂရုမစိုက်ခဲ့ပါ ဤအချက်သည် ကြာမြင့်လာသောအခါ သန်းရွှေ၊ မောင်အေး၊ ရွှေမန်း၊ တင်အောင်မြင့်ဦး တို့ကပါ သတိပြုမိကာ ဘဝ နေဝင်ချိန် မှောင် မိုက်ခဲ့စေသော တစ်ချက်ဖြစ်ပါသည်၊
မင်းသားကြီးခင်ညွှန့်၊ သူကိုတော့ အထွေထူးသေးစိပ်ရန် မလိုအပ်ပါ၊ ၁၉၈၈ မှစ၍ ၂၀၀၄ တိုင် ရုပ်/သံဖွင့်လျှင် သူ့ကို မမြင်ချင်ဆုံး၊ ကြားဖူးသည်မှာ အောင်မြင်သော ရုပ်ရှင်မင်းသားဖြစ်ရန် လူများ များဆုံး မကြာခဏ မြင်ဘူးရမည်၊ သို့ဆို လျှင် ၂/၃ …. သေချာနေပြီး သူ့ရယ်ပါ။ မင်းသားကြီးဘဝရည်မှန်းချက်ကြီးသည်၊ သူ့၏ နောက်ဆုံးရည်မှန်းချက်က သူသည်တပ်မတော်ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ်ဖြစ်ရန် (သို့) နိုင်ငံခေါင်းဆောင်ဖြစ်ရန်။
၁၉၉၇ တွင် ဒု ဗခက တင်ဦးနေအိမ်သို့၊ ဂျပန်နိုင်ငံမှ တဆင့်၊ ပါဆယ်တစ်ထုတ်ပို့ကာ ဗုံးခွဲခဲ့ရာ၊ သမီးချိုလဲ့ဦး (ကထိက) သေးဆုံးခဲ့ရသည်ကို မြက်ခင်းသစ် မဂ္ဂဇင် ပင်တိုင်ဆောင်းပါးရှင် ဖိုးကံကောင်းက၊ ဂျပန်မှ မြန်မာ့ပြည်ပြေးများက လာဘ်လာဘလိုလားသည့် တင်ဦးကို လက်ဆောင်ပို့တာဖြစ်ကြောင်း၊ သတင်းစာရှင်းခဲ့ရသည်၊ (ထိုအချိန်က၊ ကက လှမ်း၊ ဒုညွှန်မှူး ဗခက ကျော်ဝင်း၏ သားဖြစ်သူထင်ကျော်သည် မသရ၊ တိုကျိုတွင် ဒုတိယ အတွင်းဝန် တစ်ဦးဖြစ်ပြီး၊ တိုကျို၊ မြန်မာ စစ်သံရုံးသည်လည်း မြန်မာသံရုံးနှင့် အပြိုင်င်လျှို့ဝှက် လှုပ်ရှားနေချိန် ဖြစ်သည်ကို .. .. .. ..)
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အမင်္ဂလာပွဲ သီတင်းကျွတ်ရင် ကျင်းပမယ်
ကောင်းကွက်တွေ တစ်ကွက်တလေမှ ၊ ဟုတ်တိပတ်တိ မရှိတဲ့
စစ် အတ္ထုပ္ပတ္တိ ဂွကျကျ ၊ အနှစ်နှစ် အလလ အထက်က ဂုတ်ခွစီးပြီး
စစ်သူတောင်းစားများ ၊ တင့်တောင့်တင့်တယ် မလိမ်မိုးမလိမ်မာ လိမ် တင်တောင်းမဲ့
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အမင်္ဂလာပွဲ သီတင်းကျွတ်ရင် ကျင်းပမယ် ၊
တိုင်းပြည် သတိုးသမီးက ကိုယ့်ကိုကိုယ် ကြိုးဆွဲချသေချင်စိတ် ဖြစ်သလိုမျိုး
နာဂစ်ထက်ဆိုးတဲ့ သတိုးသားယောင်ဆောင်ထားတဲ့ စစ်ဝရမ်းပြေး ဖွဲ့စည်းပုံ က
ဘ၀တွေကို ပေါ်တာလို ဖမ်းချုပ်ဖို့အကွက်ဆင် အမိဖမ်းနေတယ်။
စစ်ကိုအတူတူ ဆင်းဆင်းရဲရဲ ထမင်းရည်ပူယက်သလို မယက်နိုင်တော့
ချစ်သူတွေနဲ့ သဘောထားမကွဲပဲ ခွဲခဲ့ရတဲ့ခေတ်မှာ
အန္တရာယ် နဲ့ ဒုက္ခတွေ ပူးတွဲ ခြေစွမ်းပြကြလို့
သက္ကရာဇ် နှစ်သစ် နေ့ရက်တွေ နှာခေါင်းရှုံ့ချိန်မရခင်
ဒဏ်ရာအဟောင်းမှာ ဘ၀ နှာခေါင်းသွေး လျှံခဲ့ပြီ ၊
စစ်စနစ် ခွဲစိတ်မှား ၊၀ါဒ ဆေးထိုးမှား ၊ဒဿန ဆေးသောက်မှားလို့
တိတိကျကျ မပြတ်သားတဲ့ အတွေးအခေါ်များလဲ သေဆုံးခဲ့ဘူးတယ် ၊
အနွေးထည်မလိုအောင် ပူပြင်းတဲ့ ဘ၀ မာရသွန် ခရီးရှည်မှာ
အအေးမိ တွေဝေစိတ်နဲ့ အမှားကို လက်ပိုက်ကြည့်ပြီး မိုက်ရူးရဲမဆန်ချင်ကြနဲ့ ။
လက်မရွံသမားတွေရဲ့ သွေးရူးသွေးတန်း ကြော်ငြာ စစ်ကြွေးကြော်သံများက
ရောင်းအားမကောင်းတဲ့ သွင်းကုန် ထုတ်ကုန်လို အတ္တအကျိုးစီးပွားကို မျှော်ကိုးတယ် ၊
သဘောထား သေးသိမ်တဲ့ သမားတုလို လက်စွဲဆောင်ပုဒ်တွေနဲ့
စစ်ယစ်ထုတ်များ အာဏာဝမ်းချုပ်နေတယ် ။
စစ်ခါးပတ်နဲ့ အရိုက်ခံရလို့ ခေတ်ရဲ့ဘ၀ကျောပြင်မှာ
မြင်မကောင်းအောင် နာကျည်းချက် အရှိုးရာတွေပြည့်နှက်နေတယ်၊
စစ်ဖိနပ်နဲ့ အကန်ခံရလို့ တိုင်းပြည် ရဲ့ စီးပွားရေး နံရိုးလဲ အပြိုင်းပြိုင်းကျိုးနေတယ် ၊
အဓမ္မ ပြည့်တန်ဆာလို စစ်အတ္တတွေ ဖရိုဖရဲ ၀ုန်းဒိုင်းကြဲနေတယ် ။
စည်းစနစ်မရှိတဲ့ ကမောက်ကမ ဖြစ်စဉ်များထဲ
ပရမ်းပတာ ကြမ်းကြမ်းတမ်းတမ်း စီးမျောဆဲမှာ
ညစ်ညမ်းလေထုကို ပြန်ရှုရိုက်သလို နှလုံးသားများ မောဟိုက်နေတယ် ၊
ဒွိဟဖြစ်စရာမလိုတဲ့ ပြဿနာများ အလုံးအရင်းတိုက်ခိုက်နေတယ် ၊
အဆိုးကြုံလို့ အရိုးတွေ တောင်လိုပုံနေတယ် ။
ဖယ်ဒရယ်ဆိုတာ ခွဲထွက်ရေး မဟုတ်ပဲ
ပေါင်းစည်းရေးမှန်း ကောင်းကောင်းမှန်းဆ မတွေးတောကြဘူး၊
အမိမြေ ရင်ကွဲ ပက်လက်မဖြစ်ဖို့
ထောင် ၊ ဆေးရုံ ၊ တရားရုံးမှာ လူတွေ စုရုံး ၀ရုန်းသုံးကားဖြစ်နေကြတယ်
ငွေတွေနဲ့အတူ ဒဏ်ရာများ ဖောင်းပွ
သောကများ တအုံနွေးနွေးမှ တဟုန်းဟုန်း တောက်လောင်နေပြီ ။
ခြေလှမ်းဖွဖွ ၀င်လာတဲ့ ကျယ်ကျယ်လောင်လောင် မတရား ရွေးကောက်ပွဲသတင်းများ
မပီမပြင် ပြတ်ပြတ်သားသားရုပ်မြင်သံကြားလို အရုပ်ထင်
နှစ်ရှည် ပြည်နှင်ဒဏ်ပါထိတဲ့ ဥပဒေမဲ့ခေတ်မှာ
သတင်းထောက်တွေရဲ့ အနာဂတ်အိမ်ယာဟာ ထောင်ဖြစ်တော့မယ်။
ယုံကြည်ချက်များ ဓားသွားလို ထက်မြက်
ခံယူချက်များ သံမဏိလို မာကြော
တရားလိုတွေ တရားခံဖြစ်တဲ့ မိုက်ရိုင်းတဲ့ တစ်ခါသုံး စစ်စနစ်ကို စစ်ကြေငြာပြီး
၂၀၁၀ အမင်္ဂလာပွဲ သီတင်းကျွတ်ရက် မရောက်ခင်
ကမ္ဘာ့မြေအပြင်ဖက်ကို အမိမြေက ၀ိုင်းဝန်း လွှင့်ပစ်လိုက်ချင်ပြီ ။
မြန်မာပြည်သားစာစောင် (အတွဲ ၆၊ အမှတ် ၇၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ ၂၀၁၀)
လွတ်လပ်စွာ ရွေးချယ်ပိုင်ခွင့်မရှိတဲ့ အမင်္ဂလာပွဲ သီတ...
မြန်မာပြည်သားစာစောင် (အတွဲ ၆၊ အမှတ် ၇၊ ဇန်န၀ါရီလ၊ ...